‘कृ’ को ६ दिने कलेक्सन कति ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘कृ’ को ६ दिने कलेक्सन कति ?
शुक्रवारबाट नेपाल अधिराज्यभरी कूल १ सय १८ पर्दामा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको युवा स्टार अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र ‘कृ’ को ६ दिने कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।
बिहीवार राजधानीमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै निर्माता सुवास गिरीले फिल्मको ६ दिने कलेक्सन ५ करोड ४४ लाख रहेको बताए । यसबाट निर्माताले २ करोड ४० लाख शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
‘कृ’ ले पहिलो दिन देशभरबाट कूल ९५ लाख ६५ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ, दोस्रो दिन १ करोड ७७ लाख ६४ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ, तेस्रो दिन ६६ लाख ६८ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ, चौथो दिन ५६ लाख १९ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ, पाँचौ दिन ८५ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ र छैठौं दिन ६२ लाख ९५ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ कलेक्सन गरेको निर्माता गिरीले जानकारी दिए ।
यस्तै, निर्माताले चलचित्रको ओभरसिज राइट्स ८० लाख र ब्राण्डबाट ५० लाख रुपैयाँ हात पारिसकेका छन् । निर्माता गिरीले भने, ‘६ दिनेको कलेक्सनसँगै अब हामी सुरक्षित भएका छौ । अब चलचित्रले गर्ने व्यापार हामीलाई नाफा हुनेछ ।’
चलचित्रका अर्का निर्माता भुवन केसीले ‘कृ’ लाई मिलेको दर्शकको उत्साहजनक साथले आगामी दिनमा अझ राम्रो चलचित्र बनाउन हौसला मिलेको बताए । उनले भने, ‘हामीले निकै महंगो लागतमा चलचित्र बनायौं । हामीले के थाहा थियो भने राम्रो चलचित्र बनाए दर्शकले मन पराउनुहुन्छ । ‘कृ’ ले त्यो प्रमाणित गरेको छ । दर्शकको यो साथले भोलीका दिनमा झन ठूलो लागतमा चलचित्र निर्माण गर्ने जोश थपेको छ ।’
फिल्मको कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा अनमोल केसी भने अस्वस्थ भएका कारण उपस्थित भएनन् । नायिका अदिती बुढाथोकीले आफूलाई पहिलो चलचित्रबाट मिलेको उत्कृष्ट प्रतिक्रियाले उत्साहित भएको बताइन् । यस्तै, निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले आफ्नो मिहिनेत रुचाइदिएकोमा दर्शकलाई धन्यवाद दिए ।
सुवास इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा तयार भएको चलचित्रको प्रस्तुतकर्ता द सुपर काजोल फिल्मस् हो । कमल गिरी कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रका सह–निर्माता श्री पराजुली हुन् ।